लगातार २५ बर्षदेखि हेटौंडाको शहिद स्मारक समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री पौडेल
मंसिर ३, २०७६ ०७:४५:३१
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पुनः हेटौंडामा रहेको शहिद स्मारक समितिको अध्यक्षमा चयन भएका छन् । स्मारकको २०५१ साल माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए र त्यतिबेलादेखि लगातार पौडेल अध्यक्ष नै रहिरहेका छन् ।
लगातार २५ बर्ष सम्म अध्यक्ष बनेका अहिलेका मुख्यमन्त्री पौडेलले केहि समय अघि ‘मुख्यमन्त्री छोड्न सक्छु, तर सहिद स्मारकको नेतृत्व छोड्न सक्दिनँ’, भनेका थिए । सोहि अनुरुप अहिलेपनि पौडेल अध्यक्ष भएका छन् ।
२०५१ मा पनि पौडेल हेटौंडाका मेयर थिए र स्मारकको अध्यक्ष । हाल मुख्यमन्त्री भएपछीपनि उनले स्मारकको अध्यक्ष छाड्न नसक्दा विभिन्न टिका-टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
त्यस्तै अधिवेशनबाट पौडेलको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति र सल्लाहकार समिति चयन गरेको छ  तर ५ जना सांसद सदस्य छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी, रामचन्द्र राई, प्रतिनिधिसभा सांसद विरोध खतिवडा, प्रदेश सांसद मुनु सिग्देल र जुनेली श्रेष्ठ समितिको सदस्यमा चयन भएका छन् । समितिमा पूर्वसांसद अन्नत पौडेल तथा नेकपा नेता केदार न्यौपानेसमेत छन् ।
प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा पौडेल निर्वाचित भएपछि उनले स्मारक समितिको नेतृत्व अर्कैलाई सुम्पिनुपर्ने आवाज नउठेको होइन । तर अहिले पनि उनीनै अध्यक्ष भइरहदा मुख्यमन्त्री पौडेलमा पदको मोह झल्किएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले पदकै लोभले लगातार स्मारक समितिको अध्यक्ष बनिरहेका हुन् या उनले गरेको जति काम अरुले गर्न सक्दैन भन्ने ठानेर नछोडेका हुन् ? मुख्यमन्त्री ज्युले समितिको अध्यक्ष नबसिकनै स्मारकलाई माया गरिरहदा कसो होला ?
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक १८, २०७६, १२:११:००